Ogeysiis buuxa oo ka socda Denizli illaa Waddo Cusub oo Cusub | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliLaga soo bilaabo Denizli ilaa waddada cusub ee deegaanka
21 / 04 / 2019 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Fikrad buuxda ah
Waxaa dhameystiray degmada Boosaaso ee 50 Meelo cusub Waddooyin cusub, ka dib markii la furay gaadiidka oo laga helay muwaadiniin buuxa. Fikradda guud ee dadka reer Denizli oo u mahad naqay Duqa Dukumiintiga Cusmaan Zolan oo soo waday New Ring Road magaalada, taas oo badbaadisay waqti iyo shidaal badan, wuxuu ahaa dawo.
Intaa ka sokow fulinta mashaariicda gaadiidka guulaha oo dhan mid ka mid ah magaalada, degmada Denizli waxay sidoo kale qaadday tallaabooyin cusub oo lagu kordhinayo tirada dadka iyo tirooyinka gawaarida, waddada New Peripheral oo leh xajmiga mitirka 50 ee la furay gaadiidka waxay keenaysaa Cali Marim Boulevard iyo Hal Boulevard Bridge. Wuxuu siiyay fursad aan kala go 'lahayn ee Bozburun iyo wadada Ankara. Goobta New Ring Road, 1200, Yenisehir, Adalet, Gümüşler, Üçler, Göveçlik, Yenişafak, Hisar, Hallaçlar, Barutçular, Bereketler, Çakmak, Kadılar iyo xero xaafado ah oo ku yaal gobolka Karahasan ayaa gaarey İzmir Boulevard, Bozburun iyo Ankara. Waddada New Ring Road, oo badbaadisay tobannaan kun oo baabuur ah oo ka soo galaya xarunta magaalada, ayaa si weyn u yareeyey cufnaanta gaadiidka.
Sida duulimaadka garoonka
50 Meelaha Waaweyn ee New Ring Road, oo la mid ah duufaanta garoonka diyaaradaha ee muwaadiniinta, waxay ka kooban tahay 4 tagitaan, 4 imaatin, booska baabuurta ee 2, waddada baaskiilada iyo meelaha basaska. Waxaa sidoo kale jira xeelado caqli ah oo 3 ah oo ku yaal wareegga xuddunta labadaba. Duqa magaalada Minneapolis, oo u mahadnaqay C / llaahi Zolan, oo u keenay New Ring Road magaalada, fikradda guud ee dadka reer Denizli wuxuu ahaa daawo.
Maxay muwaadiniintu yiraahdeen?
Ahmet Yeşilkaya: orum Waan ka mahadcelinayaa Degmadda Deegaanka Denizli. Wadadani waxay leedahay qiimo aad u sareysa. Wadadani kama helin gobol kasta. Maraynkeennu wuu ka sareeyaa dawladiisii ​​hore, waxaa jira farqi fara badan, waa isbeddelay. Ilaahay ha ka farxiyo qarankeena oo ha u isticmaalin shil aan. Waxaan ku jiray gaadiidka magaalada tan iyo 1979, aad u raaxo leh. Waddada cusubi way ka duwanayd. "
Ekrem Utsal: "Jidka New Route wuxuu ahaa mid aad u qurux badan. Isticmaalka dariiqa safka ee afar dariiqa waa mid aad u raaxo badan oo qurux badan. Gaadiidku wuu fiicnaa. Gaadiidka socodka ee wadadan waa mid aad u wanaagsan, qof kastaa wuxuu sameynayaa isbedel raaxo leh. Dhibaato kuma jirto gaadiidka, waddadan ayaa ku habboon magaalada. Waxaan u mahad celinayaa Duqa Magaalada Cusmaan Zolan. "
Adem Özügür: "Waddada Cusub ee New Ring waa qurux badan, adeeggu maaha mid xun, laakiin way fiicantahay in la xaliyo baahiyahan iyo in lagu xaliyo dhibaatooyinka gaadiidka dadweynaha. Dadku waxay aadi karaan meel ay u socdaan si dhakhso ah iyo si aad u raaxo leh. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Dawladda Hoose. "
Seyfettin Utsal: "Gobalka ayaa horumariyey. A buluugaal ayaa u muuqday. Waxaan ka faa'iideysan doonaa tan mustaqbalka. 4 strip samsung, 4 ayaa ka soo duulaya magaalada imaanshaheeda horay u sii kordhaysay, sidoo kale waxay ahayd mid aad u wanaagsan. "
Tobanaan kun oo baabuur ah ma galaan xarunta magaalada
Duqa magaalada Osman Zolan ayaa sheegay in ay xaqiiqsadeen maalgashiyo badan oo ku aadan Dekedda gaar ahaan marka la eego gaadiidka waxayna tiri, ilaa inta aan ka sameynay xarumaha 16 illaa iyo hadda waxaanan gargaar ka bixinnay gaadiido badan oo iskudhaf ah. Meelaha cusub ee wiiga ah, xaafadaha 1200, Yenisehir, Adalet, Gümüşler, Üçler, Göttçlik, Yenişafak, Hisar, Hallaçlar, Barutçular, Bereketler, Çakmak, Kadılar ve Karahasanlı, tobanaan kun oo gawaarida waxay galaan bartamaha magaalada ama Boulevard ama wadada Bozburun ilaa Ankara. ayaa gaari kara. "
Nidaamka Maareynta Wadooyinka ee gudaha iyo kan qaranka
Duqa magaalada Osman Zolan ayaa tilmaamay in ay sii wadayaan in ay neefsadaan magaaladda iyada oo maalgelinta gaadiidka laga sameeyo dhanka gaadiidka sii kordhaya. Duqa magaalada Zolan ayaa yiri, "Jidkeena cusub ee giraanta cusub wuxuu ka dhigay wax weyn oo muwaadiniinteena ah si ay u safraan si xushmad leh isla markaana aan wakhti lumin. Waxa ugu muhiimsan waa in la daboolo baahida qarankeena. Waad mahadsantihiin Ilaahay, waxaan sii wadeynaa inaan sidaan sameyno.
Denizli Road Ring Road
Malaayiin indhood ah ayaa raacay Kocaeli